Shina : Miteraka “Fihazàna Trozona” Ny Saritaka Avy Amin’ilay Lalao Rosiana Famonoantena Amin’ny Aterineto · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 30 Jona 2017 5:28 GMT
Trozona, kanton'ny làlana any Bishkek izay nosasàn ho fotsy taorian'ny saritaka avy amin'ilay lalao antsoina hoe “Blue Whale / Trozona Manga”. Sary avy amin'ny Kloop.kg, creative commons.
Nandray fepetra henjana momba ilay lalao famonoantena amin'ny aterineto avy any Rosia atao hoe ” Blue Whale (Trozona Manga)” i Shina.
Ny fanakanana ny teny fototra mifandraika amin'ilay lalao ao amin'ny milina fikarohana no nanombohan'ireo manampahefana izany, ary dia betsaka ireo vondrona lalao amin'ny haino aman-jery sosialy no rava. Tamin'ny 12 May, voasambotra ny shinoa tanora iray noho ny fanapariahany eritreritra mihoa-pefy tamin'ny aterineto rehefa nandray anjara tamin'ilay lalao izy.
Amin'ny alàlan'ny haino aman-jery sosialy no ikarakaràna ilay lalao ary tsy maintsy manefa andiana asa tsy maintsy atao ireo mpilalao, isan'izany ny fifohazana amin'ny 4: 20mn mandritra ny 50 andro misesy. Ahitàna fampijaliantena ny sasany amin'ireo asa tsy maintsy atao ireo ary farany dia mety amporisihina hamono tena ireo mpilalao.
Efa tompon'antoky ny famonoantena 130 mahery tany Rosia ny “Blue Whale” hoy ireo Fampahalalàm-baovao maro any Rosia. Efa niparitaka be tamin'ny alàlan'ny gazetiboky kely tany amin'ny firenena maro izany, isan'izany i Shina, na dia efa nampitandreman’ ireo mpanome vaovao toy ny Radio Free Asia, ny Meduza ary ny haba-tranonkala mpanamarina ny zava-misy Snopes aza fa tsy voaporofo sady angamba tafahoatra loatra ilay fanamarihana.
Mampitebiiteby ny votoaty sy ny kolontsaina manodidina ilay lalao, saingy angamba diso làlana ny valintenin'i Shina, ary raha ny marina dia mamorona fahalinana bebe kokoa manodidina ny “Blue Whale”.
Tamin'ny 8 May, haino aman-jery Shinoa marobe mpanome vaovao no namoaka fampitandremana momba ny “firongatry” ny lalao famonoantena Rosiana “Blue Whale”, amin'ny famporisihina ireo mpisera amin'ny aterineto mba hiteny amin'ny mpitandro filaminana rehefa mahita vondrona lalao. Nofintinin’ny STV, mpanome vaovao ao an-toerana, ireo tatitra ao amin'ny vovonan'ny haino aman-jery sosialy Weibo :
[Tonga ny lalao famonoantena?] Omaly, (8 May), maro ireo haino aman-jery mpanome vaovao no namoaka fampitandremana momba ilay “Blue Whale”, lalao Rosiana famonoantena. Raha mahita olona mampiasa ny teny fototra toy ny hoe “Bleu Whale” na “Wake me up at 4.20mn (Fohazy amin'ny 4ora 20mn maraina aho)” miaraka amin'ny sarin'ny “trozona Manga” ao amin'ny haino aman-jery sosialy ianao, mbà mailo satria mety efa avy nandray anjara tamin'ilay lalao famonoantena antsoina hoe ” Blue Whale ” izy. Izahay, manokana dia mampitandrina ny ray aman-dreny, mbà araho maso re ny vondrona QQ-n'ny zanakareo. Tsy vazivazy izany !
Avy amin'ny antson'ny mpitandro filaminana misahana ny aterineto mba hanaovana ankivy ilay lalao no fototr'ilay fampitandremana. Any Shina, izay efa mahazatra hatraiza hatraiza ny sivana atao amin'ny aterineto, dia lasa fanentanana ara-politika ny sahoan-dresaka manodidina ilay lalao. Nandrakotra io tranga io ihany koa ny Global voices tany amin'ny mpifanolo-bodirindrina anankiroa amin'i Shina any Azia Afovoany, Kyrgyzstan sy Kazakhstan.
Na heverina ho raitra aza ny tontolon'ny sivana amin'ny aterineto any Shina, dia hita toa mampisalasala ny filazana ny fidiran'ilay lalao “Blue Whale” amin'ny sehatra goavana any Shina. Toy ny tany Kyrgyzstan sy Kazakhstan, dia voalazan'ny porofo fa taorian'ny fanentanana fanakanana ilay vondrona tamin'ny haino aman-jery sy ny aterineto no tena nampiroborobo ny fanaovana ilay lalao.
Iza no handeha hihaza trozona ?
Tamin'ny 9 May, ny ampitson'ny fampitandreman'ny haino aman-jery, dia nambaran'ny Fikambanan'ny Tanora Kaominista Shinoa tao amin'ny Weibo ny fanombohan'ny fanentanana momba ny “Tetikasa Fihazàna Trozona” :
Nahoana ianareo no manidy ny tenanareo any ambany ranomasina lalina any ? Afaka manidina eny an'habakabaka malalaka ianareo ! Efa nanomboka ny ” Tetikasa Fihazàna Trozona ” …
Nandefa hafatra mitovy amin'izany tao amin'ny Weibo ny Mama Juries, fikambanana iray hafa, rantsan'ny antoko, tamin'io andro io :
[Azafady mba lazao fa ] lalao famonoantena avy any Rosia ny “Blue Whale”. Mamporisika ny mpilalao hanatanteraka fampijaliantena misesy ao anatin'ny 50 andro ilay lalao. Tanora maro no voatarika hamarana ny fiainany. Efa tafiditra aty amin'ny firenentsika ny vondrona QQ toy ny “wake me up at 4:20am” ( fohazy amin'ny 4:20mn maraina aho) .Nanomboka nanadio ireny vondrona ireny ny ekipa mpiaro ny QQ. Fihetsika mamoafady ny fihetsika mifandray amin'ny ” lalao famonoantena Blue Whale” satria mandrisika sy mitarika ny hafa hampijaly tena sy hamono tena. Mampatsiahy ireo ray aman-dreny ny Mama Juries mba hanamarina ny findain'ny zanany [ mba ahitàna raha mpikambana ] amin'ilay vondrona sosialy izay mampiasa ny teny fototra “Blue Whale” na “Wake me up at 4:20mn maraina” izy ireo. Raha mahita izany vondrona izany ianao, azafady mba lazao !
Netsehan'ny Biraon'ny fanomezam-baovao amin'ny aterineto any Beijing ny fikambanana toy ny Fikambanan'ny Tanora Kaomonista sy ny Mama Juries, tamin'ity fanentanana ity. Mangataka ny hiarahan'ny haba-tranonkala lehibe sy ny sehatry ny haino aman-jery sosialy amin'ny fanentanana sy fanaovana tatitra amin'ny vahoaka ihany koa io birao io.
Tamin'ny 12 May, dia nihaona tamin'ireo orinasa valo mpikirakira aterineto ny Biraon'ny Fanomezam-baovao amin'ny aterineto, Biraon'ny Filaminam-bahoaka, ny Ekipan'ny Fitantanana ny Fampiharana ny Lalàna amin'ny Tsenan'ny Kolontsaina, mba hilazàna momba ny famotehana ny “Bleu Whale”.
Sarin'ny mpitandro filaminana misakana ny lalao blue whale amin'ny aterineto Shinoa.
Araka ny tatitry ny haino aman-jery ao an-toerana, dia nakaton'ny andrarezin'ny aterineto Tencent ny vondrona QQ am-polony ary nosakanany ny tenifototra mifandray amin'io tsy ho hita amin'ny milina fikarohany. Nakaton'ny Baidu ny sehatra fifanakalozan-kevitra rehetra ahitana ny teny fototra toy ny “Blue Whale” na ” Blue Whale game”.
“Azafady, alaviro ireo hetsika mety hitarika amin'ny fampijaliana tena”, no hafatra miseho amin'ny milina fikarohan'ny Baidu rehefa mitady ny “Blue Whale” ny mpisera amin'izao fotoana izao. Voadio daholo ireo voka-pikarohana rehetra mifandray amin'izany mba hahazoana antoka fa tsy misy rohy mankany amina tranonkala izay miaro ny fampijaliana tena na famonoana tena ilay fikarohana.
Sakanan'ny Sina Weibo ny teny fikarohana ary vonoiny ny hafatra mifandray amin'ilay lalao.
Nampian'ireo lehiben'ny mpitandro filaminana misahana ny cyber manerana ny firenena ilay famoretana, na amin'ny alàlan'ny fandefasana hafatra fampitandremana na amin'ny fanadihadiana ny tatitr'ireo mpisera amin'ny aterineto. Amin'ny ankapobeny, takian'ny mpitandro filaminana hanafoana ilay vondrona ny mpitantana azy.
Tanora voasambotra tany Guangxi
Fa tany amin'ny faritanin'i Guangxi, tanànan'i Zhanjiang, voasambotry ny mpitandro filaminana ny zatovo iray 17 taona noho ny fiampangana azy ho “nanaparitaka ny fomba fisainana mahery fihetsika” tamin'ny fandefasana ireo sary sy fanehoankevitra mamporisika ny fanaovana ny “asa” fampijaliana tena tao aminà vondrona resadresaka tao amin'ny QQ tamin'ny 12 May.
Notantarain'ilay tanora tamin'ny mpitandro filaminana fa tamin'ny 9 May izy no niditra tao amin'ilay vondron'ny lalao QQ “Blue Whale”, taorian'ny nanombohan'ireo haino aman-jery mpanome vaovao ny fanentanana.
Araka ny filazan'ny mpitandro filaminana ao Guangxi, tany am-boalohany ilay vondrona QQ dia nataony hivarotana rindrambaiko sy akanjo. Fa mba hisintonana mpikambana maro dia nanomboka namoaka ny vaovao momba ny “Blue Whale” izy rehefa avy namaky ny fampitandremana nalefan'ireo manampahefana tamin'ny haino aman-jery mpanome vaovao ao an-toerana.
Navoakany ihany koa ny sary iray mampiseho sandry iray misy tombokavatsa trozona manga sady namorona vaovao fa mpikambana iraika ambin'ny folo ao amin'ny vondrona no efa ‘ nahavita ilay asa’, mba ahafahana misintona mpikambana vaovao maherin'ny 200 ho ao amin'ny vondrony.
Ny zava-nihatra tamin'ilay zatovo dia toa milaza fa mety hisintona ny sain'ny maro ho amin'ny “Blue Whale”, ary mety hisy fiantraikany mifanohitra amin'izay nandrasana, ny fandrakofana tamin'ny haino aman-jery sy ny ezaka mba hifehezana ny fandraisana anjara amin'ilay lalao.
Ireo izay tsy mahafehy ny fitiavany te-hahalàla zavatra dia tsy voasakana fa hahita làlana hidirana amin'ilay lalao avy any ambadik'ilay Rindrin'afo Lehibe izay mamaritra ny aterineto Shinoa. Ho setrin'izany, dia namorona fantsy ho an'ny fanentananany ny Ligin'ny Tanora amin'ny fanaparitahana ny taridàlana Happy Blue Whale amin'ny aterineto .
Hareraha-tsaina tsy voatsabo no antony voalohany mahatonga ny famonoantena. Azo tsaboina ny harerahan-tsaina ary azo sorohana ny famonoantena. Afaka mahazo fanampiana avy aminà antso tsimbaratelo momba ny olana mitarika hamono tena sy ara-pihetsehampo ireo tratr'izany. Tsidiho ny Befrienders.org mba hahitanao ny fanampiana ety anaty aterineto hisorohana ny famonoantena ao amin'ny firenena.